Ihe ị ga-ahụ na Seville n'otu ụbọchị | Njem akụkọ
Mariela Carril | 12/05/2022 17:00 | Emelitere ka 12/05/2022 18:42 | Ihe ị ga-ahụ, Sevilla
Ọ bụrụ na ịga njem na Spain ma ọ bụ mee njem nlegharị anya n'ime ma kpebie ịga Seville, enwere ebe ụfọdụ na ahụmahụ ụfọdụ ị na-agaghị echefu. Kedu otu na ihe ị ga-ahọrọ? Oge awa 24 abụghị ogologo oge, na-atụle na akụkụ na-aga na nrọ ma eleghị anya ọzọ na njem ...
Yabụ ebe a bụ ndepụta anyị Ihe ị ga-ahụ na Seville n'otu ụbọchị.
2 Nzukọ-nsọ ​​nke Onye Nzọpụta
3 Ogige Spain
4 Royal Alcazar nke Seville
5 ụlọ elu ọla edo
6 Ogige Ọhụrụ
7 Mpaghara nke Triana
10 Na-eri nri na Seville
11 Hụ ihe ngosi flamenco
Ọ bụ akara nke obodo na n'otu oge ahụ Ọ bụ ụlọ nsọ gothic kasị ukwuu na Europe, yabụ ọ bụrụ na-amasị gị ụdị ụkpụrụ ụlọ a, ị gaghị atụfu ya. N'ime bụ ili nke Christopher Columbus, nke na-agbakwụnye mmasị maka nleta ahụ.
Ihe kacha mma bụ ịzụta ihe Tiketi jikọtara ọnụ ileta Katidral, Giralda na Ụka ​​El Salvador, ihe niile bụ 10 euro. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye euro 5 ọzọ, ị ga-ewere ntuziaka ọdịyo. La Giralda bụ ụlọ elu mgbịrịgba, otu oge kachasị elu n'obodo ahụ.
E wuru ụlọ elu ahụ n'oge mweghachi na nsụgharị mbụ ahụ gụnyere minaret nke ụlọ alakụba nke dịbu n'ebe ụlọ nsọ Katọlik. Ị nwere nlegharị anya dị ebube site na ebe a, mana mara na ọ nweghị steepụ, ọ bụ naanị mgbapụ na-amị amị. Ọ bara uru n'ihe ize ndụ.
Nzukọ-nsọ ​​nke Onye Nzọpụta
Ọ bụ yi ụka na na-akpali nnọọ mmasị style. Ewubere ya n'etiti narị afọ nke 8 na XNUMX. Ọnụ ụzọ ịhụ ya n'ime na-efu euro XNUMX.
The square bụ kasị ewu ewu square na Ọwara mmiri dị ogologo nke obere ụgbọ mmiri na-esi na ya na-agafe gburugburu gbara ya gburugburu. Ọ bụ n'ime ogige María Luisa, nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Spain bụ Aníbal González Álvarez Ossorio wuru ya, na 1929, ma na-anọchi anya njikọ dị n'etiti mba ofesi na udo.
Square nwere n'aka yi taịlị si n'akụkụ niile nke mba na ọ na-emeghe na Gualdaquivir River, ụzọ Atlantic na kpọmkwem ógbè America. Oghere ahụ dịkwa n'akụkụ Avenida de Isabel la Católica na o doro anya na ọ bụ ọha na eze nweere onwe ya ịbanye.
Na square ị ga-ahụkwa ụgbọ ala. Ị nwere ike ịkpọrọ ha gaa n'ọnụ ụzọ katidral ka ịgagharị obodo ahụ. Ụzọ kachasị mma bụ ịmalite na katidral wee gafee ogige María Luisa ruo mgbe ị rutere Plaza de España. Ọ bụ nnukwu njem ma na-efu ihe dị ka euro 36 maka ndị okenye anọ.
Ị maara na ọtụtụ ihe nkiri nke Egwuregwu ocheeze?
Ọ bụ ije nkeji ole na ole site na Plaza de España. Nke a bụ a ama ama obí nke e wuru na XNUMXth narị afọ, ọ bụ ezie na narị afọ nke iri na anọ e weghachiri ya n'ụdị mudejar. Taa, ndị ezinụlọ ka na-eji ụfọdụ ụlọ arụrụ arụ arụrụ arụ dị ka ebe obibi ha.
Ebe e wusiri ike bụ ụlọ obí Europe kacha ochie na-eji na kemgbe 1987 ọ bụ akụkụ nke UNESCO ndepụta.
ụlọ elu ọla edo
Ụlọ elu a bụ na mbụ akụkụ nke mgbidi obodo nke kewara Alcázar site na Seville ndị ọzọ, na ebumnuche nke chịkwaa ụzọ gafere na osimiri Guadalquivir. Ọnụ ụzọ na-efu euro 3.
Na-eje ije site na obodo na-aga kwupụta katidral ị ga-agafe nke a obosara na mbara ámá nke ọmarịcha ụlọ gbara ya gburugburu. Taa, ụlọ ndị ahụ, ụfọdụ n'ime ha, bụ ụlọ ahịa ndị a ma ama na-emepụta ihe. Ọ bụghị ebe jupụtara na ndị njem nlegharị anya ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ pearl n'èzí njem nlegharị anya mmadụ, nke a bụ otu n'ime ha.
Mpaghara nke Triana
A ije site na otu n'ime mpaghara kacha maa mma ma maa mma nke Seville ọ bara uru. Ọ dị n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri ahụ, naanị ị ga-agafe akwa mmiri. Na mbụ ọ dị ka e liri ndị eboro ebubo amoosu...
Ọ bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Jurgen Mayer mere ihe owuwu ọgbara ọhụrụ a wee mee ka ogige obodo echefuru echefu. Ndị a bụ nche anwụ osisi nwere ụfọdụ ọrụ azụmahịa. Ya bụ, enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na panoramic terracs iji nwee ọmarịcha echiche.
Ihe mmetụ ọgbara ọhụrụ n'obodo ochie.
Ụlọ mara mma sitere na XVII narị afọ, taa dị n'aka gọọmentị Andalusia kwụụrụ onwe ya. O nwere ụlọ ụka mara mma nke ụdị Baroque, nke enwere ike ịnweta site na otu n'ime patios ya, nke nwere mbinye aka nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Leonardo de Figueroa.
Ọ bụ otu n'ime ụlọ ndị kacha ochie n'obodo ahụ na ụdị Mudejar.
Na-eri nri na Seville
Ọ bụghị naanị maka ime njem nlegharị anya mana gbasara ya ahụmahụ ndụ, mgbe ahụ, na Seville ị ga-enwe mmasị na gastronomy mpaghara na ebe dị mma bụ Duenas Bar. Ọ bụ obere ụlọ mmanya na-esi nri ụdị ụlọ ma mepee n'elekere asatọ nke ụtụtụ. Ị nwere ike iri ebe ahụ ma ọ bụ zụta nri wee gaa n'ihu na-eje ije.
Ogwe Ọ dị n'ihu Palacio de las Duenas, nke e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX. ụlọ nke Dukes nke Alba ruo na narị afọ nke XNUMX yana nchịkọta nka dị egwu. Ị nwere ike ịga leta ya. nyochaa ime ya na ubi ya… N'ezie, mmanya na-emepe na 8 mana obí na-emepe naanị na 10.
Ebe ọzọ a tụrụ aro ka ị rie bụ Obodo Santa Cruz, ezigbo njem nlegharị anya ma ọ dịghị obere mma maka nke ahụ. Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX, n'ọtụtụ akụkụ, ọ bụ ezie na a na-ahụ akwa akwa ochie na oghere ya dị warara na oghere ya. N'ámá ha n'ebe ahụ ọnụ ọgụgụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya na cafes.
Saịtị ọzọ nwere ike ịbụ Bar Gonzalo, n'ihu Katidral nke Seville. Ọ bụ ụlọ edo edo, ọnụ ahịa anaghị adị ọnụ ala mana efere na-atọ ụtọ n'ezie. Ị nwere ike iri nri ehihie maka euro 22 paella na ọkụkọ maka mmadụ abụọ.
Hụ ihe ngosi flamenco
Flamenco na Seville bụ otu aha ya mere ị nweta ọmarịcha ihe ngosi kwesịrị ịdị na ndepụta anyị. Enwere ọtụtụ ihe ngosi mana na Calle Águilas bụ Flamenco Museum, ebe dị mma ịmụta banyere ịgba egwu a ma hụ ihe ngosi ndụ.
Ọ bụrụ na ị na-anọ n'abalị n'ime obodo, ihe dị mma bụ ịpụ iri nri n'otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị a na-egosi flamenco, ma ọ bụghị ya, a na-enwe ụlọ ngosi ihe mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Sevilla » Ihe ị ga-ahụ na Seville n'otu ụbọchị